Global Voices teny Malagasy · 3 Jona 2011
03 Jona 2011
Tantara tamin'ny 03 Jona 2011
Yemen: Antony nahatara an'i Saleh!
Nanala azy ny mpisiokantsera tamin'ny fampiasana ny tenifototra #AntonynahataraaniSaleh teo am-piandrasana ny kabarin'ny filoha Yemenita Ali Abdullah Saleh, izay nanaraka ny tatitra fa naratra tao amin'ny Lapam-panjakana izay nisy nanafika maraina tao Sanaa. Efa nilalao tenifototra mitovitovy aminy ny mpisiokantsera raha nahemotra ny kabarin'ny filoha Ejipsiana Hosni Mubarak – #AntonynahataraaniMubarak...
Yemen: Saritaka ao Sanaa amin'ny vaovao mifanohitra momba an'i Saleh
Tafalatsaka anaty korontana tanteraka ny renivohitra Yemenita Sanaa nandritra ity folakandro ity, noho ny fisian'ny vaovao mifanohitra momba ny filoha Yemenita Ali Abdullah Saleh. Raha milaza ny sasany fa nandao ny lapam-panjakana ao Sanaa izy, ny hafa kosa nitatitra fa naratra izy nandritra ny fifandonana nitranga. Indreto ny tora-po voalohany...
Toniziia: Tsy Azo Ihodivirana Ny Fanemorana Ny Fifidianana Nokasaina Ho Ny 24 Jolay
Tokony hifidy izay ho mpikambana ao amin'ny antenimiera ry zareo Toniziana amin'ny 24 Jolay. Tato ho ato,na izany aza, dia nanomboka niparitaka ny vaovao momba ny fanemorana ny fifidianana ho amin'ny 16 Oktobra. Tsy nahafaly ireo Toniziana mpitoraka bilaogy ilay vaovao ary ny sasany tamin-dry zareo aza dia miantso mihitsy...
Mila Antenimieran'ny tanora ve i Malezia?
Nanao volavolan-kevitra ny hananganana ny Antenimieran'ny tanora ny praiminisitra maleziana mba hanairana sy hanentana ny tanora handray anjara amin'ny fitantanana ny firenena. Mizara ny heviny momba ity lohahevitra ity ny mpamaham-bolongana.
Fampidirana am-ponja ny mpitoraka blaogy sady mafana fo Andrzej Poczobut any Belarosia
Polonina03 Jona 2011
Tamin'ny 6 Aprily i Andrzej Poczobut, Poloney mpifandray amin'ny gazety Poloney mpivoaka isanandro Gazeta Wyborcza any Belarosia sady mpitoraka blaogy mafana hajain'ny fiaraha-monina Belarosiana noho ny herim-pony mamatsy vaovao ny fampielezam-baovao fototra, dia nosamborina araka ny lalàna Belarosiana roa samihafa – noho ny fanompàna sy fampielezam-baovao tsy marina momba an'i Alexander...
Ejipta: Manapaka ny Tsipika Mena; Mampiaka-peo Manohitra ny Tribonaly Miaramila
Volana vitsy lasa izay, ny fandehananao akaiky loatra ny Tranobe Fitsarana Miaramila ao amin'ny distrikan'i Nasr, ao Cairo, dia efa mety hitondra anao any am-ponja. Nefa ny 31 May teo, sehatra nanaovana fihetsiketsehana ho fanehoana firaisankina amin'ilay mpanolotra fandaharana ao amin'ny OnTv, Reem Maged, sy ilay mafàna fo amin'ny resaka...
Azia Atsimo03 Jona 2011
Tetikasa an-toerana ny TEDx , nokarakaraina hifampizaran'ny olona traikefa-TED. Eo amin'ny andiany faharoa ny TEDx Karachi notontosaina ny 27 Mey 2011 tao an-tanàna manana seranana Karachi. Nokarakarain'ny TED Senior Fellow 2011 sy mpanoratra ao amin'ny Global Voices Advocacy Awab Alvi, ry Sharmeen Obaid Chinoy ary ny hafa koa ny hetsika. Anushka Jatoi...